China Welding Machine, DC Welding muchina, AC Welding muchina, Welding mask, Welding accessories fekitori uye vagadziri | Boda
Chinangwa chemagetsi emagetsi muchina ndechekusanganisa iyo yekunamatira uye izvo zvinoshandiswa kuti zvibatanidzwe nekushandisa iyo yepamusoro-tembiricha arc inogadzirwa neiyo pakarepo pfupi-redunhu pakati pezvakanaka nezvakaipa matanda, kuti ubatanidze zvinhu zvakabatika.
Chimiro chayo chiri nyore kwazvo, iri yepamusoro-simba shanduko. Welding muchina inogona kukamurwa mumhando mbiri zvinoenderana nerudzi rwekuburitsa simba, imwe AC magetsi, imwe iDC magetsi. Ivo vanoshandisa musimboti we inductance, inductance inogadzira yakakura voltage shanduko kana uchibatidza uye kudzima, uye shandisa yakakwira voltage arc inogadzirwa neiyo pakarepo pfupi dunhu pakati pezvakanaka nezvakashata matanda ekunyungudutsa iyo solder pane iyo electrode, kuti vagone kuzadzisa chinangwa chekubatanidza maatomu.
Magetsi emagetsi michina anoshandiswa zvakanyanya. Welding muchina chinhu chakakosha chishandiso chemakambani makuru ekuvaka ngarava, maindasitiri uye emigodhi emakambani uye akasiyana mabhizinesi ekuvaka. Magetsi Welding muchina unoshandiswa pakuwisira zvinhu, uye unemagetsi mukushandisa.
Kunyanya, mamwe madiki ekuvaka zvikamu anotenga zvakachipa emagetsi emagetsi michina kuitira kuchengetedza mutengo. Zviri nyore kukonzera kushamisika kwemagetsi, moto uye kudzikira kana uchinge washandiswa munzvimbo ine hukasha yenzvimbo yekuvaka, inozokuvadza kuchengetedzeka uye kuchengetedzeka kwepfuma. Nekuda kwehunhu hwesimbi hwakaipa, zvinokwanisika kudonha chirongwa chekuvaka.
Zvakanakira DC yekushongedza muchina: chakakosha ndechekuti iyo arc haina kugadzikana panguva yeWDC yekutengesa, nekuti iyo yazvino haisi zero poindi, inogona kuchengetedza arc kupisa pasi peiyo diki diki yazvino, uye zvakanyanya inogona kushandisa ese marudzi ese emhando tsvimbo; iyo yekupinza yekupinda yakakura, uye panguva imwechete, ine simba-yekuchengetedza. Kuipira kweiyo DC yekutengesa muchina: DC iri nyore kusarura arc, iyo yazvino haigone kuve yakanyanya kukura.
Izvo zvakanakira AC kutenderera ndeiyi: kutanga, hazvisi nyore kurerekera arc; chepiri, dunhu rakajairika re AC yekushambadzira muchina iri nyore uye iyo yekukundikana mwero iri pasi zvishoma; Izvo zvakanakira AC yemoto muchina ndeinotevera: kazhinji, yakakura uye yakakura; panguva imwecheteyo, iko kushandiswa kwesimba kweshanduko kwakakura uye iko kushandiswa kwesimba kwakakomba, uye iyo-chikamu-chimwe chekuisa chinokanganisa iro gridhi remagetsi.
BOSENDA inopa akateedzana emuchina wekutema kubva kuDC yekumisikidza uye AC yekutengesa.Muchina wekutemera unogona zvakare kugadzirwa, tinogona kuita zvese OEM neODM. Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama, inzwa wakasununguka kutibvunza.
Pashure: Yemagetsi tepi, kupisa kutsigira tepi, PVC tepi, kuputira tepi
Zvadaro: PVC inonaya prrof jira, Pe mvura inonongedza jira, chifukidzo cherori
Ac Welding muchina
Dc Welding muchina
Magnetic sikuru ikakuruma, screwdriver ikakuruma, musoro sikuruu ...
Kumonyanisa chibooreso, Stainless simbi chibooreso ikakuruma, simbi D ...
Kuveza huni reza, aruminiyamu saha reza, carb ...